छिमेकी देशसँगको सहकार्य नयाँ ढङ्गले बढाउन जोड | गृहपृष्ठ
Home समाचार छिमेकी देशसँगको सहकार्य नयाँ ढङ्गले बढाउन जोड
on: १७ श्रावण २०७५, बिहीबार ०८:२० समाचार
छिमेकी देशसँगको सहकार्य नयाँ ढङ्गले बढाउन जोड
काठमाडौं । नेपालले विकास र समृद्धिका लागि छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सहकार्यलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
बुधवार नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र भारतको पीएचडी चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रीबीच नेपालको समृद्धिको मार्गचित्रका विषयमा भएको छलफल र परिसङ्घका प्रबुद्ध सदस्य डा. शम्भुराम सिङ्खडाद्वारा लिखित ‘नेपाल, भारत र चीन सम्बन्ध’ विषयक पुस्तक विमोचनमा वक्ताहरूले सो विषयमा जोड दिएका हुन् ।
दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा रहनु चुनौती नभई नेपालको लागि अवसर अएको बताउँदै वक्ताहरूले यसबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा अहिले लगानीको वातावरण बनेकोले दुवै देशलाई लगानी भित्र्याउन आग्रह गरे । नेपालमा अहिले स्थिर सरकार भएको र लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले आर्थिक समृद्धिको कुरा मात्र गरेर समृद्धिमा नपुगिने हुनाले दुई छिमेकी राष्ट्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जानकारी दिए ।
नेपालको विकासका लागि दुवै देशको भूमिका रहने हुनाले उनीहरूका अनुभव, लगानी र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नेतर्फ क्रियाशील हुन यस प्रकारका छलफल सहयोगी हुने शर्माले बताए । कार्यक्रममा नेपालस्थित भारतीय दूतावास तथा चिनियाँ दूतावासका उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी थिए ।